जनयुद्ध स्वार्थ थियो कि राष्ट्रसेवा ?
ganga dahal- जनयुद्ध स्वार्थ थियो कि राष्ट्रसेवा ? यो परिवर्तनको लाभा थियो कि लाभको लगानी ? आखिर जनयुद्ध के थियो ? विश्लेषण जरुरी भएको छ ।
किनभने जनयुद्ध परिवर्तनको सुरुआत थियो, चेतनाको छाल थियो । सोचमा, शासनमा रहेको कुडाकरकड, काई फाल्ने विप्लव थियो । नयाँ समाज निर्माणको एक अभियान थियो र थियो सुन्दर शान्त, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, स्वाधीनताको उज्यालो ।
त्यही उज्यालोको लागि मार्गदर्शन थियो जनयुद्ध ।
जनयुद्ध सफल भयो । पुरानो सत्ताले घुँडा टेक्यो, जनयुद्धकारी शक्तिले सिंहदरवार उक्ल्यो । परिवर्तन आयो त ।
परिवर्तन आयो, परिवर्तन चाहने आमनेपाली यसअर्थमा सफल भए । जनताले चाहे भने जतिसुकै पुरानो जब्बर भएर रहेको सत्ता भए पनि हार हुनेरहेछ र जनताकै जीत हुनेरहेछ भन्ने परिणाम आज हाम्रा सामु छ । पुराना सकिए, नयाँ आए ।
परिवर्तनको १३ वर्षपछि समयले प्रश्न उठायो– परिवर्तन यही हो त ?
जनताले खोजेको परिवर्तन यही हो जस्तो लाग्दैन । किनभने परिवर्तनकारी शक्तिहरु सत्तामा छन्, राज्यलाई जुनसुकै राजमार्गबाट अघि बढाउन सक्ने जनबल उनीहरुसँग छ । तर जनतामा असन्तोष बढ्दै गएको छ । जनता आक्रोसित भइरहेका छन् । खोजेको परिवर्तन पाउँदा पनि जनता किन सन्तुष्ट हुनसकेनन् ? यसको कारण र निदान खोज्ने जिम्मेवारी नेतृत्वको हो ।
जनयुद्धमा लाली छायो, जनयुद्धपछि सूर्य उदायो । अहिले त हँसिया हथौडादेखि सूर्य एकै भएका छन् । सूर्य उज्यालो हो । हँसिया हथौडा निर्माण, समृद्धि हो । उज्यालो र समृद्धिको यो समायोजन, फ्यूजन कता देखियो ? जनताको मुहारमा, जनताको घरदैलोमा, जनताको जीवनशैलीमा कतै छ, देखिन्छ उज्यालो ? छैन भने किन छैन, देखिन्न भने किन देखिन्न ?
उज्यालोको खोजी मान्छेको प्रवृत्ति हो । मान्छे भन्नु नै परिवर्तन हो । समय भन्नु नै परिवर्तनको चाहना हो । हिजोभन्दा आज नयाँ खोज्नु, सहजता खोज्नु मान्छेको मनोबृत्ति हो । हिजोभन्दा आज झन झन खराव हुनथालेपछि मान्छे रिसाउँछ । आज मान्छे मान्छेमा बढेको असन्तुष्टि यही हो ।
हिजो न्यायका लागि न्यायपूर्ण आवाज घन्काइयो । त्यो आवाजमा न्यायप्रेमी जनताले साथ दिए । न्याय हिजो चाहियो भने आज न्याय चाहिन्न ?
न्याय दिन नसक्नु नेतृत्वको कमजोरी हो । हिजो न्यायका लागि चेतना छर्नेले बुझ्नु पर्दैन, न्यायको आवाज आज पनि उठ्छ, भोलि पनि उठ्नेछ । न्यायपूर्ण समाज भएन भने मान्छेले बिद्रोह गर्छ । हिजोको विद्रोह न्यायको लागि थियो भने आज र भोलि पनि न्याय विद्रोह गरेरै खोजिने छ । न्याय दिने नेतृत्वले अन्याय ग¥यो भन्ने अनुभव हुनासाथ न्यायको आवाज उठ्छ ।
यसकारण जनयुद्ध के का लागि थियो ? परिवर्तन किन गरियो ? जनयुद्धको कारण र परिवर्तनको परिणाम आज आमनागरिक खोजिरहेको छ । यदि यो सवालको जवाफ दिन सकिएन र सन्तुष्ट पार्न सकिएन भने अर्को विप्लव, अर्को विद्रोह, अर्को जनयुद्ध नहोला भन्न सकिन्न । सुख दिन नसकिएला, सन्तुष्टि दिनैपर्छ । आशा र भरोसा, विश्वास म¥यो भने केही पनि बाँकी रहदैन । डढेलो भनेको यही हो । डढेलो सल्किन सक्छ, समयमै सम्हालिऔं ।